Xaflad sagootin ah oo loo sameeyey danjiraha Iswiidhan ee la badalayo | Somaliska
Dowladda Soomaaliya ayaa magaaladda Muqdisho waxaa ay xaflad satoogin ah u sameeysay danjirihii Iswiidhan u fadhiyey Soomaaliya, kaas oo xilka dhawaan ka dagaya. Xafladan sagootinkla ah ayaa waxaa ka qeyb galay qaar ka tirsan madaxweyne Farmaajo iyo qaar ka tirsan wasiiradda xukuummaddiisa.
“Dawladda Soomaaliya waxay uga mahad celinaysaa safiir Mikael Lidvall, kaalinta mugga lahayd ee uu ka qaatay xoojinta xiriirka labada dal intii uu hayey xilka Safiirnimo iyo dadaaladii ay ku bixisay Safaaraddu hawlaha gargaarka iyo arrimaha bulashada” ayuu yiri Wasiirka arrimaha dibadda & iskaashiga caalamiga ah Yuusuf Garaad Cumar.
Danjire Lindvall, oo isna halkaas ka hadlay ayaa sheegay sida uu ugu faraxsanyahay wada shaqayntii iyo garab istaaggii uu ka helay dadaxda iyo shacabka Soomaaliyeed muddadii uu joogay dalka ee uu danjiraha aha. Wuxuu sheegay in dowladda Iswiidhan ay mashaaruuc horumarineed ka fulin doonto Soomaaliya oo ay ugu horeeysa dhinaca caafimaadka gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka oo ay dowladda Iswiidhan ku bixin doonto 8.5 Malyan.
Ugu dambeyntii danjire Linvall, waxaa halkaas waxaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku gudoons-siiyey agab haddo iyo dhaqan u ah ummadda soomaaliyeed. Dhawaan ayey aheyd markii dowladda dalkaan ay Soomaaliya u magacaawday danjire cusub oo lugu magacaabo Andreas von Uexkül oo xilka la wareegaya bisha sibteember ee innagu soo fool leh haddii Alla idmo. Iswiidhan ayaa maanta yadana waxaa ay danjire cusub u magacoowday dalka Itoobiya, kaas oo isagana dhawaan howl geli doona.